Soosaarka Sibidhka Sibidhka Shiinaha iyo Warshadda | Jusheng
Sibidhka sibidhka Kaaliyaha
Sibidh Sibidh ah oo Dhex-dhexaad ah
Balanbaalis Balanbaalis Sibidhka Silo
Silo budada Sibidhka
Sibidhka Silo Qalabka
Sibidhka Silo Aerators
Sibidhka Silo Auger
Silo Kaydinta Sibidhka
Shamiito Shamiito oo la taaban karo
Sibidhka Sibidhka Horizontal
Sibidhka Yar ee Sibidhka
Sibidhka mobilada wareega
Sibidh sibidh la qaadan karo
Kaydinta Sibidhka Silo
Silo In Warshad Sibidh
Sibidhka sibidhka, oo sidoo kale loo yaqaan taangiyada sibidhka, ayaa sidoo kale loo qaybin karaa silo sibidh kala jaban iyo silo sibidh ah oo isku xidhan Kala-goynta silo guud ahaan waxay ku habboon tahay gaadiidka weelka si loo badbaadiyo kharashka iyo wareegga wareegga. Sibidh ayaa si wada jir ah loogu isticmaalaa warshadda isku-darka la taaban karo ee taageerta, isticmaaluhuna wuxuu ku beddelayaa miisaska sibidhka awoodo iyo caddadyo kala duwan iyadoo loo eegayo soosaarka warshadda isku-dhafka ah. Waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee warshadda isku qasan. Kaydinta sibidhka ka sokow, waxay sidoo kale kaydin kartaa waxyaabo badan, sida dambaska duqsiga, macdanta fiican, hoobiye qallalan, hadhuudh, iwm. Shiilohdu waxay leeyihiin oo keliya astaamo roob leh, qoyaan-caddeyn ah iyo waxyaabo si fudud loo isticmaali karo. Waxaa loo isticmaali karaa fureyaasha balanbaalis, qalabka wax lagu kala wareejiyo, gacmo isku xirnaanta jilicsan, iwm., Si looga soo qaado qalabka silo ilaa baaldiga mitirka. Silo guud ahaan waxay ka kooban tahay boodh aruuriyaha iyo waalka sii deynta cadaadiska. , Heer heer sare ah oo hooseeya, qulqulka hawo gargaar qulquli, dheecaan waalka balanbaalis iridda, qalabka filter iyo xakameeyo golaha wasiirada. Gaadiid daabacan si loo hubiyo jawi shaqo oo aan boodh lahayn.
Qaabka Lambar Awood Dhexroor Silo Silo dherer Dhererka dheecaanka
Model silo Awoodda dhirta Qty halkii geed
DKS50T / 100T 60m³ / saac 1/2
DKS100T 90m³ / saacaddii 2/3
DKS100T / 120T 120m³ / saac 1/4
DKS200T / 300T 180m³ / saacaddii 3/4
DKS300T 240m³ / saac 3/4
Sileedka sibidhka ayaa inta badan laga sameeyaa warshadda birta ee Q235 si loo kaydiyo shamiintada. Waxay leedahay laba nooc, silsilad isku xidhan & silo la shiiday, aaladda silo waxay ka timaadaa 30t-1000t.
Siidhka sibidhka waxaa ka mid ah qaybaha soo socda: jaangooyooyinka, mashiinka dayactirka, jirka taangiga, jaranjarada, ilaaliyaha, tuubada quudinta, silo soo aruuriyaha siigada, waalka sii deynta cadaadiska, cabirka heerka hoose iyo hoose, baaquli gaaska gargaarka qulqulka, waalka baalal balanbaalis, qalabka filter Iyo xakamaynta golaha wasiirada
Calanka Bakhaarka Sibidhka
1. Siidhka sibidhka jilicsan ayaa fududahay in la rakibo lana kala furfuro.
2. Waa la buuxin karaa oo si fudud ayaa loo rari karaa.
3. Waxqabadka quful xoog leh.
4. Muuqaal qurux badan.
Rakibaadda: Siidhka sibidhka wuxuu ka kooban yahay taarikada birta ah, oo ay ku xiran yihiin boolillo, taas oo aad u fudud in la soo ururiyo lana kala furfuro. Shaqaalaha khibradda leh waxay ku dhammaystiri karaan rakibaadda siinka sibidhka fiidyowyada rakibidda ama tilmaamaha rakibidda.
Awood: Silo sibidhka looxa waxaa loo isticmaali karaa 50 tan, 100 tan, 200 tan, 300 tan, 500 tan, 1000 tan. Cabbirka ugu dambeeya waxaa loo qaabeeyey iyadoo loo eegayo deegaanka iyo shuruudaha maxalliga ah, sidaa darteed xal kasta oo sibidh ah oo shamiito ah ayaa u gaar ah macaamilka.
hadaad wax su'aalo ah qabtid,fadlan nala soo xiriir: sales@dongkunchina.com
Silo isku dhafan Isdhexgalka Badeecada
1. Taangiyada sibidhka waxaa badanaa loo isticmaalaa inay yihiin wax soo saar lagu taageerayo dhir isku qasan (dhismayaasha) shubka ah.
2. Waxay ku habboon tahay rarista sibidhka badan iyo dambaska duqsiga qalalan. Waxay leedahay astaamaha roobka aan u adkeysan karin, qoyaan-celiyaha iyo fududahay in la isticmaalo; qeexitaannada iyo cabirrada ayaa sidoo kale lagu sameyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
3. Guud ahaan waa qaab dhismeedka taageerada dhululubada, oo leh qalab ka saarista boodhka qaybta sare si looga hortago daadinta boodhka, iyo aalad jabisa qaansada qaybta hoose si looga ilaaliyo budada agglomeration iyo in budada si habsami leh loo dejiyo. Waxaa sidoo kale lagu qalabeeyaa qalab dareemo heer walxo ah, oo la xakamayn karo wakhti kasta. Isticmaalka maaddada.
4. Guud ahaan, gaari xamuul sibidh badan ayaa loo isticmaalaa in lagu soo diro gaaska budada silo; iyada oo loo eegayo qaabdhismeedka silo sibidhka, guud ahaan waxaa jira laba qaab oo loo soo dejiyo alaabta, mid waa in lagu xiro qaybta hoose iyo qalabka wax lagu kala wareejiyo, loona isticmaalo qalabka wax lagu wareejiyo in lagu diro budada budada. Midda labaad waa in la isticmaalo gudbinta pneumatic (loogu talagalay haamaha sibidhka leh qaabab gaar ah).
5. Siinka sibidhka wuxuu leeyahay qaab dhismeed fudud, rakibo habboon, meel dabaq yar, maalgashi hooseeya, dhaqdhaqaaq xoog leh, iwm.
6. Silo sibidhku waxa loo isticmaali karaa 50 tan, 100 tan, 200 tan, 300 tan, 500 tan, 1000 tan. Cabbirka ugu dambeeya waxaa loo qaabeeyey iyadoo loo eegayo deegaanka iyo shuruudaha deegaanka,
Nidaamka isugeynta wadarta otomaatiga ah, Mashiinka Dufcaanta Isugeynta, Qaybo ka Mashiinka Mashiinka la taaban karo, Isugeynta Nidaamka Dufcadda, Automatic Wadar Dufcaddii Bacriminta fiicni, Nidaamka Qiyaasta Wadarta Wadarta,